Khudbadihii Masaajidda Salaadaha Jimcaha gudaha dalka Soomaaliya iyo dibadiisa oo looga hadlay dilkii Sh C/qaadir Nuur
Garoowe:-Waxaa maanta Khudbadii Jimcaha ee inta badan Masaajidada Deegaanada Puntland iyo S/land looga hadlay dilkii foosha xumaa ee loo geystay Sheekh.C/qaadir Nuur Faarax Raximahulaah waxaaana looga
Sheekh.Umal oo Khudbadii Jimce uga hadlay dilkii Sheekh.C/qaadir Nuur Faarax.[Dhagayso]
Nairobi:-Waxaa maanta Khudbadii Jimce ee Masjidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Nairobi uu Sheekh Maxamed Cabdi umal uga hadlay dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Sheekh. Cabdulqaadir Nuur Faarax A
Khudbadii Masjidka Al-Hidaaya oo looga hadlay dilkii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax(Dhageyso)
Nairobi:-Waxaa maanta Khudbadii Jimce ee Masjidka Al-Hidaaya ee magaalada Nairobi looga hadlay dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax Allaha u naxariistee waxaana khu
Tacsi ku socta Ehelkii,Dr Ahmed Bashir C/laahi (Hoolif)
Inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun !!!!! Dhammaan dadkaan hoos ku xusan magacyadoodu iyo kuwo kale oo badan oo aanan halkaan magacyadooda ku soo koobi karin waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan E
Dilkii Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax AUN maxaa Looga Dan Lahaa.?
Warku maqalkiisu wuu murugo iyo mashaqo waynaa. Wuuna Indho xumo iyo calool xumo badnaa. Qof walba oo Muslim ah naxdin iyo uur ku taalo ayuu ku reebay. Waligay ma sawiran sifo la mid ah. Una malayn ma
Culimada Soomaaliyeed oo mar kale ku baaqay in Al-shabaab aynu meel uga soo wada jeesano.[Akhriso]
Waxaa saaka ka soo baxay Xafiiska fulinta ee Ururka Al-ictsaam Bil-Kitaabi Wasunaha oo ay culimada dalka Soomaaliyeed intooda badan ay ku midaysan yihiin baaq ku socda Umadda Soomaaliyeed oo ku aada
Saddex billad Sharaf oo uu heley Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax ilaahay ha u naxariistee.
Imaamu Axmed waxaa laga sheegey Inuu oran jirey Farqiqa annaga iyo Ehlu bidaca noo dhexeeya waa Jinaazada" Hadalkaasi waa hadal wayn oo aad u qiimo badan, waxaan xasuustaa qoraalo ay soo bandhi geen w